Guurkaygii iyo Haweenkii Ilaahay Igu Galladay |
Dunida waxaa cammira, waxa dul saaranna ka faa’iidaysta oo ilaahay maamulkeeda ku karaameeyay waa aadamaha. Bini-aadamku wuxuu ka soo jeedaa lammaanahii Aadan iyo Xaawa. Bini-aadamku wuxuu wadaagaa ee ehel ahaan u xidhiidhiyaa saddex shay midkood: Qaraabo oo ah wixii xagga aabbaha ka yimaadda; Riximka oo ah wixii xagga hooyada ka yimaadda; iyo Xididtinnimo oo ah wixii guur ku yimaadda. Saddexdan shay ayaa dhaxalka hantiduna ka yimaaddaan oo marka qof geeriyoodo xoolaha mulkiya oo u hadha. Dhammaantoodna waxay ku xidhiidhsanyihiin xidhiidhka iyo isutagga lammaanaha. Guurkaygii ka hor muddadii dhallinyarada ee aan u diyaargaroobayey in aan u gudbo marxaladda xaasleyda, waxaan jeclaa in aan dookhayga ka dhex eegto hablaha kacay ee ila wakhtiga ahaa. Waxaan doonayey in aan isu diyaariyo hanashada wixii farsamo iyo dhaqaale uu u baahan yahay dhismaha reerku. Badanaa guurku wuxuu ku yimaaddaa wejiyo kala duwan: labo la isu qorsheeyo ama la isa siiyo; iyo labo is jeclaada siduu doonaba jecaylka ha loo fasiree, oo ah labo qorsheeya inay is guursadaan kii doonaa dalabka ha ku horreeyo. Caado ahaanna, Soomaalida ragga ayaa dalabku ka yimaaddaa.
Waxaan odhan karaa guurku waa dabayl iyo sah dhaqaajiya shakhsiga siduu doonaba ha ku dhashee. In kasta oo aan muddo kooban gabadh jeclaa una sheegay in aan doonayo in aan guursado iyaduna ay iga ogolaatay, haddana calaf isuma aannu yeelan. Nasiib wanaag waxaa Ilaahay igu beegay haween sharaf badan oo aannu si wanaagsan nolasha u wadaagnay ubadna ilaahay na kala siiyey. Way jirtay ugu yaraan ilaa saddex haween ah oo iga dalbaday in aannu is guursanno, balse aan ka cudur daartay duruufahaygii kala duwanaa darteed.
Waxaan guursaday saddex haween ah oo magacyadoodu u kala horreeyaan siduu guurkoodu u kala horreeyey: Koos, Saynab iyo Faadumo. Runtii waxay nolashayda ugu jiraan qayb aad u muhiim ah oo aan ku fasiri karo waa gallad Eebbahay iigu deeqay oo aanan la’aantood marnaba samayn kareen horumar, ama aanan hiigsan kareen himilooyinkayga nololeed. Waxa hubaal ah in ay haweenkaygu kaalin muhiim ah ku leeyihiin guushayda, dhammaantoodna aad baan u jecelahay.
Koos Maxamuud Aadan: waxaannu isku guursannay, anigoo dhalinyaro ah 1994-kii, Gobolka Togdheer, magaalada Burco. Waa gabadhii iyo guurkii iigu horreeyay. Waxaan guursaday aniga oo aan shaqo hayn oo aan wax xoolo ahna haysan balse waxay ahayd raaliyo aan igu xidhin wax adduunyo ah. Koos waa gabadh ku soo kortay dhaqan Soomaali hufan, waa qof dhawrsoon oo aad u deggan taas oo leh asluub iyo tilmaamo toolmoon oo ay ku dheehan tahay aqoonta diinteenna suubbani. Waxaan odhan karaa Koos waa wehelkaygii iyo degelkii aan ku degay, ku dhaqmay ee aan ku dhaqday.
Iyadaana sabab u ahayd inaan damac, dareen iyo rabitaanka ay diinteenna suubban ee Islaamku jidaysay aan tijaabiyo oo aan haween kale guursado. Aniga iyo Koos waxaa Ilaahay noogu deeqay 12 carruur ah, oo kala ah: 5 wiil iyo 7 gabdhood. Koos waa marwo dumar iyo raaliyo aan ku sifayn karo xilo-janno.
Saynab Sh Cismaan Aw Jaamac: waxaannu isku guursanay sannadkii 2003-dii, Gobolka Maroodijeex, magaalada Hargeysa. Waa xaaskaygii labaad. Waxaan guursaday aniga oo shaqaysta oo leh xaas hore iyo carruur oo nasiib-wanaag garanaya sida reer loo maamulo. Saynab waa gabadh aad u qiimo badan waana qof akhlaaq iyo adaab ilaahay ku mannaystay oo leh asluub iyo dhaqan fiican oo hiddaysanaya guri fiican iyo dhal culimo. Aniga iyo Saynab wuxuu Ilaahay noogu deeqay 6 carruur ah, oo kala ah: 2 wiil iyo 4 gabdhood. Saynab waa marwo iyo raaliyo aan ku sifayn karo xilo-janno.
Faadumo Yuusuf Xuseen: waxaannu isku guursannay sannadkii 2010-kii, Gobolka Sool, magaalada Laascaanood. Waa xaaskaygii saddexaad. Waxaan guursaday aniga oo madax ah “CEO”, oo leh xaasas hore iyo carruur oo nasiib-wanaag garaaddo-goys ku ah sida reer loo maamusho, Faadumo waa gabadh dhawrsoon kana timi guri dhawrsoon, waana qof akhlaaq iyo adaab ilaahay ku mannaystay. Waa qof aad u qiimo badan. Wuxuu Ilaahay deeq noo siiyay 4 carruur ah, oo kala ah: 4 wiil iyo 1 gabadh ah. Faadumo waa marwo iyo raaliyo aan ku sifayn karo xilo-janno.
Haweenkayga qiimaha badan waxaannu nolasha u soo wadaagnay si aad u fiican, waxaanay guushayda ka yihiin qayb aad u muhiim ah. Waxay igu soo garab galeen xaqiijinta iyo ka midho-dhalinta hadafkayga. Haweenkayga qiimaha badan waxaannu ku soo wada noolayn (haddeerna ku wada noolnahay) kalgacal, ixtiraam, xushmad iyo wanaag badan taa soo aan weligay haweenkayga cidi na soo dhex galin ama aan na loo gar qaadin. Dabcan, bini-aadamka lagama waayo isqabad ama qardoofo. Haddiiba ay dhacdo in aniga iyo haweenkayga ay ka dhex dhacdo wax fikir ama ku kala duwaanansho xagga aragtida ahi, annagaa gaar u dhammaysanna.
Ogow degganaanshaha guriga iyo isdaryeelka lammaanaha ayuu dadku isku dhaafaa. Waxaa jirta odhaah Soomaaliyeed oo ka soo jeedda miyiga iyo reer guuraaga: “Nin maalin ma gaadhid oo waa ninka kaa faraska fiican; Ninna sannad ma gaadhid oo waa ninka kaa geeddi horreeya ee barwaaqada xoolihiisa daajiya; Ninna weligaa ma gaadhid oo waa ninka kaa xaaska wanaagsan.”
Waqtigan xaadirka ah, waxaan ahay aabbo masuul ka ah saddex xaas iyo 22 ubad ah. Waxaa xaqiiqo ah inay aad u adag tahay in xilka iyo masuuliyadda iga saaran qoysaskayga aan si dhab ah uga soo baxo. Gaar ahaan, gudashada xuquuqda ay igu leeyihiin carruurtayda iyo xaasaskaygu, iyadoo aan higsanayo in aan gaadho himiladayda. Run ahaantii arrin sahlan ma aha maamulidda, caddaalad u samaynta, waxbarashadooda iyo korintooduba.
Waxaan dareemayaa runtii masuuliyad ballaadhan iyo culays. Mahadda Alle, waxaa kaalintaa inteeda badan iga daboolay oo igala dabaashay marwooyinkayga qiimaha badan ee ilaahay igu galladay.
Haddaba, haddii aannu ilaahay kugu garab galin, ama aannu kugu galladin lammaane kula garab taagan daryeel iyo dulqaad dhab ah. Way adag tahay inaad isku mar noqoto aabbo wanaagsan iyo siyaaasi ama hoggaamiye xilkas ah oo ummaddiisa u adeega! Xasuus badan ayay igu leedahay wakhtiyo badan oo aan jeclaa in aan carruurtayda iyo haweenkayga la qaato, waxaa se ii diiday oo suurto-gal iiga dhigi waayey hiigsiga iyo fanashada meelaha bar-tilmaameedka ii ah ee aan is leeyahay gaadh. Marwooyinkayga qiimaha badan waxay iigu dulqaateen duruufo kasta oo adag oo ila soo gudboonaada; waxayna igu garab galeen inaan guntiga u xidho ka shaqaynta danta guud ee bulshada iyo horumarinta naftayda. Waxay ii sameeyeen naf hurid badan waxayna igu taageereen sidii aan u xaqiijn lahaa himilooyinkayga waqtiga dhow iyo kuwa waqtiga dheerba, aniga oo jecel in aan taariikh wanaagsan iyo mahadho dunida ugaga tago.
Waxaa laga yaabaa in aad is waydiiso xaasaska saddexda ah maamuliddooda iyo maaraynta masayrka ka dhalan kara guurka badan. Masayrku waa wax jira oo ilaahay ku abuuray haweenka, nebiguna wuxuu ku tilmaamay qiiro ama dareen haweenka ku abuuran. Masayrku haweenka wuu ku kala badan yahay sida deeqda, geesinnimada, fahamka, aftahamada iyo garashaduba ugu kala badan tahay dadka. Waxaan ku tilmaami karaa waa jacaylka haweenaydu ninkeeda u qabto ee aanay jeclayn in lala wadaago iyo werwerka kalsoonideeda ku imanaya ee gaadhi kara qalbi-jab weyn ama in ay ka aamin baxdo ninkeeda oo ay ku qanacdo in ninkeedii gabadh kale ka qaadday.
Waxaa hubaal ah in raggana Ilaahay damac ku abuuray, awoodna u siiyey hanashada iyo maamulidda wax ka badan hal xaas, iyada oo diintuna u oggolaatay afar dumar ah in ninku guursan karo. Dabcan awoodda maamul iyo xikmadda maaraynta ee raggu waa kala badan tahay oo kama sinna raggu: mid wuxuu maamuli karaa hal xaas, midna hal xaas wax ka badan. Waxaa taa la mid ah dhaqaalaha quudinta qoyska iyo qancinta gogosha oo iyana ku xidhan hadba inta haynta iyo awooddiisu le’eg tahay: waxaa suurta gal ah nin aan hal xaas ka adkayn oo saddex ama afar isku waabo.
Haddaba su’aasha ay jawaabteedu halka milyan u dhigantaa waxa weeye: goorma ayuu ninku guursan karaa? Waxay aniga ila tahay waa marka uu xaaskiisa quudin karo dhaqaale ahaan, ee qancin karo awood ahaan, isla markaana kalsoonida haweenkiisa hanan karo iyada oo uu ilaalinayo in dhaawac gaadho qalbiga xaaskiisa iyo jacaylka lammaanaha u dhexeeya, haddiiba dhaawac yimaaddana uu yahay mid sahlan oo la dhayi karo ama la bogsiin karo. Masayrka haweenka raggaa abuura, waxaana qayb weyn ka qaata xajmiga kor u kaca iyo hoos u dhaca macaamilka ninka iyo sida uu qoysaskiisa u maamulayo. Waxaan is leeyahay waan ku guulaystay hanashada kalsoonida haweenkayga, in aan dhaawac weyni gaadhin quluubtooda iyo in aannu jacayl ku wada noolaanno. Hawraartan ayaan curiyey aniga cabiraya guurka.
Rixim iyo qaaraabiyo tol iyo xidid la raad raaco.
Ramlada ciida alihii naga khalqay ee aayad ku rumeeyay.
Rasuulkii sunada noo dhigiyo ruum siday werisay.
Reer wacan qofkii helay dunida raray intiisiye.
Raaliyaa nimcada lagu maslaa ruufka ugu dheeree.
Raasweyn haween waa nimcoyo rawdada aduune.
Racwi la cayaariyo aroos gaafka la raxleeyo.
Roomaatiga-jacayl waxa leh guurkii wanaag lagu rafiiqsaye.
Ramaas doogu baxay baan degiyo rays barwaaqaha ahe.
Raxanta dumara raasweynta aan hantiyey reero mudankooda.
Riixdii janada iyo raaliya weliba rayxaana.
Raxmaanka ayaa igu galaday haweentii intuu raaxo leeyahay.
Raatib iyo quraan iyo salaad lagu rakoocaayo.
Ruux wuxuu falaa baan gudayn raasiqnimadaa.
Rabiyow mahad adaan kuu shukriyey deeqda aad igu rakaadsiisay.
Raganimo nin sheegtiyo ninkii reernimo ku faanay.
Rooxaanta oo hadlo culimadiyo weliyo raamaystay.
Rubuc dahab ah rubiga iyo fidada rodalka miisaanka.
Rabdado lacagi kuma siinayaan rooda iyo wiil.
Rucubta laanta bixisay ee wadnaha ubadku soo raaco.
Ricidhaha iyo beerka iyo xidada ayuu kala dhex raacaaye.
Rasmi markay u baadheen caalimkiyo raasukha kitaabku
Rikoodhkii sirta ahaa ee khalqiqa raadin kariwwaye.
Raasamaalku waa awlaad saalax ah oo riiqda hadha.
Ridwaanka alle aniga iigu deeq reysin barakaysan
Rag iyo gabdhaba waan hayaa rabadin khayraade.
Rabiyow adaan kuu shukriyey deeqda aad igu rakaadsiisay.
Rafrafta iyo isdabarinta reer lagu sarcaa midho ma reebaane.
Rugta gabadha oo dilo oo raygax laga yeelo.
Reer la dayaco tukale oo rabo guur aan lagu raagin.
Roorsiga haween aanad qabin faaxishada reeban.
Risiqa oo kugu yaraadiyo xanuun tawstu kugu raagtay.
Ragaad iyo waa dhib kugu maqan dhitana deyn laguu reebye.
Raan iyo madaw ayaa qalbiga wada radeebaaye.
Reenkoo yeedhay suurta la riday jahanaboo reedhi laga yeelay.
Rawaxa la isa soo tubay qiyaamaha oo la isku rookeyey.
Ruuda dhamacda ololaysa iyo naarta ranrankeeda.
Ruux kastoo gabood falay xisaab lagu rakaateeye.
Rafiiqii badbaada ee janada raarta sare fuula.
Rabiyow fardowsiyo nasii raalinimaada.
Guurku waa sunnada aadamaha ee beerta qalbiga lagu waraabiyo jacaylka, midhaha laga gurtaana waa Ubadka, deganaanshaha maanka iyo xasiloonida nafta. Waa barashada masuuliyada ee iskaashiga shaqo ay lamaanahu ku wadaagaan nolosha, kaas oo carbiya maskaxaha firfircooniyina ka dhalato kulanka halbawlayaasha. Waxaa abuurma is weheshiga, naxariis iyo xidhiidh bulsho oo isu keena dad aan waxba wadaagi jirin. Ma hawl yara in aad noqoto shakhsi xaaskiisa u wanaagsan, Aabbe carruurtiisa u shaqeeya oo u roon, isla markaana bulshada u adeega ama noqda hoggaamiye wanaagsan.
Tags: Guurkaygii iyo Haweenkii Ilaahay Igu Galladay
Next post Tilmaan Guud iyo Dardaaran
Previous post Isticmaalka Awoodda